Xog & Gorfeyn: Soomaaliya iyo Federaalka, Waa Maxay Federaal? - Caasimada Online
Home Warar Xog & Gorfeyn: Soomaaliya iyo Federaalka, Waa Maxay Federaal?
Muqdisho (Caasimada Online)-Federal waxaa saldhig u ah qaybsanaanta awoodaha dowladda, iyadoo loo qaybinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Wadamada federalka ku dhaqma waxaan tusaale u soo qaadan karno Maraykanka, Canada, Germany, Brazil, Malaysia, Mexico, India iyo Saint Kitts and Nevis. Waxaad arkaysa xeerar mid waliba gaar u yahay labada dabaqadood ee federalku leeyahay, iyo dowladaha hoose oo iyaguna leh xeerar u gaar ah.
Somaaliya iyo Federaalka